Yekutanga beta vhezheni yeFedora 26 yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Ive ichangobva kuwanikwa kune vese Fedora 26 Beta ISO mifananidzo uye iyo mifananidzo inoenderana neFedora spins. Iyi ndiyo yekutanga beta vhezheni yeinotevera hombe vhezheni yeFedora.
Chinhu chinonakidza pamusoro peshanduro iyi kusakwanisa kuishandisa asi iyo ziva shanduro uye nhau dzeshanduro isati yatanga. Chinhu chatakakwanisa kuziva mune ino kesi uye zvinoita sekunge vanopfuura mumwe vachange vachitarisira kumwedzi waChikunguru, mwedzi wakatarwa kuuya kweFedora 26.
Fedora 26 beta ikozvino inogona kutorwa pasi kumakomputa edu
Imwe yeshanduko dzekutanga dzatinoona muFedora 26 ndiko kushandurwa kweiyo runyorwa rwezvipembenene kana zvinwiwa zviri pamutemo zveFedora. Fedora Atomic inotsiva Fedora Cloud Base, zvirinani muzvinhu zvakakosha senge midziyo uye manejimendi emabasa egore; Fedora LXQT Spin ichave nyowani nyowani yeFedora neLXQT desktop uye Python Classroom Lab ichave imwe yakasarudzika vhezheni pamwe neShuga iyo yakanangana nekudzidzisa nyowani iyo Python chirongwa chemutauro.
Pakati peFedora 26 tichawana nyowani nyowani, yakagadziridzwa uye kunatsiridza kupatsanura basa. Iyo yazvino kernel pamwe neGnome vhezheni 3.24 ichaenda neiyi huru kuburitswa. Iyo GCC compiler ichauyawo mune yayo yazvino vhezheni pamwe nezvimwe zvakakosha zvinhu zvakaita sematafura, maneja mafaera, webhu mabhurawuza, nezvimwe ...
Fedora 26 Beta ndeye kuburitswa kuburitswa, vhezheni isingakurudzirwe kuti ishandise sisitimu huru yekushandisa, zvisinei isu tinogona kuishandisa mumuchina chaiwo kuziva uye kuyedza iyi vhezheni itsva. Mune ino kesi, tinogona kuwana iyo yekumisikidza mufananidzo kubva Iyi link. Uye kana isu tikashandisa Fedora uye isu tichida kuve neyazvino vhezheni, isu tichafanirwa kumirira kusvika Chikunguru panosvika iyi vhezheni inoenderana neRedHat.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Fedora 26 yekutanga beta vhezheni yava kuwanikwa